Mayelana NATHI - Shenzhen MENOBeauty Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen MenoBeauty Technology Co., Ltd, yasungulwa ngo-1997, iyibhizinisi lokuqala lasekhaya lezesayensi nezobuchwepheshe eligxile ocwaningweni, entuthukweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwamadivayisi aphakeme we-Aesthetic & Medical.
Ngokuhlangenwe nakho okungaphezulu kokuthuthuka kweminyaka engama-20, imboni yethu ifanelekile nge-ISO13485 futhi manje inobuchwepheshe obunamalungelo obunikazi obunamalungelo obunikazi angaphezu kwamashumi amahlanu nemishini yokukhiqiza esezingeni eliphezulu, wonke amadivayisi ahlonishwa ukunqoba i-CE, i-ROHS njll.
Sikhonza emakethe yamazwe omhlaba ngenqwaba yezixhobo zobuchwepheshe obuphezulu lapho imakethe yaseChina isesehlwini, icubungula isabelo semakethe ephezulu namakhasimende ahlukahlukene e-OEM, i-ODM neminye imikhiqizo emhlabeni wonke.
I-MENO kanye namayunithi wezindlela zokugunyaza ezifuywayo nezamazwe aphesheya njenge China Hairdressing Beauty Association, Research Institute yase Tsinghua University eShenzhen, JMB, BASF, njll, batadisha ngokujulile ubuchwepheshe obusha kanye nocwaningo lwezokwelapha nokuphikisana minyaka yonke.
UMeno ucwaninge wakhiqiza imigqa eyi-11 ye-HIFU kanye ne-vaginal hifu patent tech ngo-2014 futhi kuze kube manje banikeze ngezinsizakalo eziningi ze-OEM & ODM ezinkampanini eziningi zasekhaya nezaphesheya kwezilwandle.
I-MENO igxila ocwaningweni futhi ikhiqize ubuchwepheshe obuphambili bokuguga, ukuthambisa umzimba i-Aesthetic & Medical device kufaka phakathi uchungechunge lwe-HIFU, uchungechunge lwemvamisa ye-Radio, uchungechunge lwe-Vacuum Cavitaion.
I-MENO, ayilandeli kepha hlala uthuthukile!
IMENO inethemba ngobuqotho lokuhambisana nawe futhi yenze ikusasa eliqhakazile!